The Ab Presents Nepal » विप्लवका बडीगार्ड नै ‘बदमास अब के हुन्छ त ?
विप्लवका बडीगार्ड नै ‘बदमास अब के हुन्छ त ?
काठमाडौं -: सशस्त्र गतिविधिमा लाग्दा लाग्दै विप्लव नेकपाले आफ्ना कमजोरी आफै औंल्याएको छ । क्रान्तिको चापभित्र केही कमजोरी र समस्या आउनु स्वभाविक नै भए पनि अलि बढी नै आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याउने खालका समस्याहरु देखापरेको उसले महसुस गरेको हो ।
राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ,कमरेड सुदर्शन (हेमन्तप्रकाश ओली) लाई गिरफ्तार गराउन उनकै सुरक्षा स्टाफ आशिषले प्रहरी सेल्टरसम्म पुर्‍यायो । उनीसँगै गिरफ्तार भएका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज शंकर अधिकारी र कमाण्डर राजीव आत्मसमर्पण गरेर हिरासतबाट निस्किए |
त्यसपछि एक वर्षदेखि जिम्मेवारीमा नखटेका र पार्टी नीति विपरित बोलेको कारण निलम्बनमा परेका पिबिएम पदम राई सरकारी पार्टीमा छिर्न पुगे । जेलमा परेका बेला पूर्व पिबिएम जीवन्तमा पनि यो समस्या दोहोरियो ।